Lorna Dee Cervantes - Feminist Chicana Voice
Feminist Chicana Voice
ederede ederede na mgbakwunye site na Jone Johnson Lewis
A mụrụ : 1954 na San Francisco
Mara maka: abuo Chicana, feminism, ide ihe na-emeghari omenala
A maara Lorna Dee Cervantes dị ka olu dị ịrịba ama na abụ uri Chicana na nke Chicana. N'ezie, o zoro aka na ya nabatara aha ahụ bụ "Chicana" dịka njirimara nwanyị na-egosi na ọ bụ Chicano . A na-akwanyere ya ùgwù maka edemede edemede nke na-agagharị omenala ma na-enyocha okike na echiche dị iche iche.
A mụrụ na San Francisco ma zụlite na San José, California, Lorna Dee Cervantes nwere ihe nketa nke Mexico na Chumash n'akụkụ nne ya na nke India na nna nna ya. Mgbe a mụrụ ya, ezinụlọ ya anọwo na California maka ọtụtụ ọgbọ; ọ kpọrọ onwe ya "ụmụ amaala California." A zụlitere ya n'ụlọ nne nne nne ya, bụ ebe ọ chọtara akwụkwọ n'ime ụlọ ebe mama ya na-arụ ọrụ dịka onye ọrụ ụlọ.
Lorna Dee Cervantes ghọrọ onye na-eme ihe ike mgbe ọ dị afọ iri na ụma. O tinyere aka na Movement Women's Liberation movement , ugbu a , Ndị Ọrụ Ugbo Ọrụ , na American Indian Movement (AIM), n'etiti ndị ọzọ kpatara ya.
Lorna Dee Cervantes malitere ịde uri uri dị ka onye dị afọ iri na ụma ma chịkọta mkpokọta nke abụ uri ya mgbe ọ dị afọ 15. Ọ bụ ezie na e bipụtara mkpakọ uri "mbụ" ya, Emplumada, na 1981, ọ bụ onye poet a ma ama tupu ya ebipụta.
Ọ na-ekere òkè na ihe nkiri uri nke San Jose, na 1974, ọ gụrụ otu n'ime abụ ya na ememme ngosi ihe nkiri na Mexico City, bụ nke mere ka ọ mara na Mexico.
A na-akpọlite ​​Chicana Star
Ọ bụghị ihe ọhụrụ ịnụ Chicano / a uri nke a na-ekwu okwu ya , ọ bụghị naanị ka ọ dị ka akwụkwọ ederede.
Lorna Dee Cervantes bụ olu a ma ama nke ọgbọ ndị Chicana na-etolite na 1970. Na mgbakwunye na ide na ịde uri uri, o guzobere Mango Publications na 1976. O kwukwara otu akụkọ a na-akpọ Mango . Oge a na-agba ọsọ site na tebụl okpokoro na-eduga na ndị Chicano dere dịka Sandra Cisneros, Alberto Rios, na Jimmy Santiago Baca.
Ahụmahụ ụmụ nwanyị
Ná mmalite nke ọrụ uri ya, Lorna Dee Cervantes chetara nne ya na nne nne ya na ederede ya. O cheghariri ebe ha no n'ime obodo dika ndi inyom na umu Chicana. Chicana feminists na-edekarị banyere ọgụ ndị ha chere ihu na ha kwesịrị itinye aka na ndị ọcha, dịka mgbagha nke nwoke na nwanyị.
Lorna Dee Cervantes kọwara Emplumada dị ka nwanyị na-eme agadi nakwa dị ka nnupụisi megide usoro Chicano. Ọ na-ewe iwe na a na-ewere ya na ọ na-adịghị eguzosi ike n'ihe n'echiche Chicano maka ikpe ziri ezi na-elekọta mmadụ mgbe o kwupụtara mmekọahụ na njem ahụ. Akpa dị ka "nwa m nwa cramp" na-ebute mmekọahụ na Chicano na otú ụmụ nwanyị Chicana si dị ka klas nke abụọ.
Mgbe e gburu mama ya n'ụzọ obi ọjọọ mgbe e bipụtasịrị Emplumada , ọ na-enwe mwute ma nwee ikpe na-ezighị ezi siri ike na ọrụ 1991 ya.
Site na Nhọrọ nke Mgbukpọ: Ụdị Ịhụnanya na Agụụ. Ebumnuche nke ịhụnanya, agụụ, mgbukpọ, iru újú, na-eme ka ọ ghọta ihe banyere ọdịbendị na ụmụ nwanyị, na ọhụụ nke ihe na-eme ka ndụ dịrị.
Lorna Dee Cervantes gara Cal State San Jose na UC Santa Cruz. Ọ bụ prọfesọ na Mahadum Colorado Boulder site na 1989-2007 ma kụziere ya usoro nkwekọrịta Creive Writing n'ebe ahụ. O nwetara ọtụtụ onyinye na nnwekọrịta, tinyere onyinye Lila Wallace Reader's Digest, Ihe Nrite Pushcart, onyinye NEA, na onyinye American Book maka Emplumada .
Akwụkwọ ndị ọzọ Lorna Dee Cervantes tinyere gụnyere : The First Quartet (2005). Ọrụ ya na-aga n'ihu na-egosipụta echiche ya nke ikpe ziri ezi na-elekọta mmadụ, na-ahụ maka ọdịda ụlọ, na udo.
Dorothy Height: Onye Ọchịchị Na-ahụ Maka Ihe Ndị Ruuru Mmadụ
Di na nwunye nke Emperor Philip II nke Spain
Augusta siri ike
Susan B. Anthony Foto
Althea Gibson Foto Osisi
Ndị inyom na-achị achị nke narị afọ nke 17
Okpokorita ndi ozo nke Southern
N'elu ejiji jiri aha nke '80s'
Otua esi ewepu akwukwo ndu
Ịrị elu Ajụjụ: M Kwesịrị ịzụta akpụkpọ ụkwụ akwa karịa akpụkpọ ụkwụ m?
Mgbaàmà na Mgbanwe nke Ugwu Ugwu Na-adịghị
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwu 50 kachasị nke 90s
Ndi Erimeri Na-efunahụ "Ihe Ọjọọ," Dịka A Na-ekwu na Ịntanetị?
Define - iji kọwaa
Akụkọ nke Celfilhane Films
Otu esi ejikọta "nkwụnye" (iji kweta, were)
Kedu ihe bụ ihu igwe ihu igwe n'ihu?
7 Amaokwu Baịbụl dị iche iche maka Ụbọchị Patriot
Akụkọ nke Samuel Clemens 'Aha Pen Aha, Mark Twain
Egwuregwu Egwuregwu Olympic nke 1960-2000
Ọnwụ ọnwụ ọ nwụrụ?
60 Movie Movie Posters
Cuzco, Peru: Okpukpe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke Alaeze Ukwu Inca
Celsius na Kelvin Conversion Ịdị Mgbanwe Nlereanya
Ntughari Ntughari Ntughari Nsogbu
Mgbochi Mgbochi Mgbu - 10 Atụmatụ maka Ndị Ọrụ Ugbo
Iwu na-emechi iwu site na State
Easy Alt Rock Songs na Guitar
Ịmụta iji agba agba agba
Òtù Executive Team nke Obama
Kedu ihe bụ asụsụ?
Ezi nhazi ga-akwụ ụgwọ na nkọwa, mana echeghị nnukwu foto